आफ्नो इमेल आइडी बनाउदा कुन राम्रो ? - Nabaraj Budha Nabin Udasi
आफ्नो इमेल आइडी बनाउदा कुन राम्रो ?
कतिपय कुरा हामिलाई थाहा हुदैन। हामिले इमेल आइडी बनाउदा प्राय Gmail कि Yahoo! कि Hotmail को यी तीन ओटा मध्य एउटा छान्नु पर्दा हामिले Google को Gmail आइडी नै छान्छौ। किनकी यसमा ब्लगर चलाउन र अन्य कुराहरुको धेरै सुबिधा र सुरक्षित छ। सिधै लाइभ च्याट गर्न पनि सकिन्छ। यति मात्रै होइन। हामिलाई कसैले इमेल गर्‍यो भने हामी अफलाइनमा भए पनि अटो रिप्लाई दिन मिल्ने पनि सेटिङमा गएर बनाउन सकिन्छ।
तर आज यस Navin Tech मा हामी अर्को छुट्टै नयाँ इमेल आइडी बनाउने बारेमा केही छोटो जानकारी दिने कोसिस गरिरहेका छौ। आशा छ पक्कै पनि तपाईलाई केही सहयोग मिल्ने छ।
आज अर्को छुट्टै इमेल Mail.com यो इमेल सेवामा तपाईं कुनै पेसामा जस्तै लेखक, व्यापारी आदि अन्य पेसा ब्यबसायमा हुनुहुन्छ भने तपाइले www.mail.com/register मा गएर आफ्नो चाहेको नाम सर्च गरेर जस्तै तपाईं गीत लेखक हुनुहुन्छ भने YourDomain@songwriter.com यस्तो हुनेछ।